URussell Crowe. Abalinganiswa bayo abathathu ababalulekileyo kuncwadi. | Uncwadi lwangoku
Es URussell Crowe, ukuthanda kwam cinema, kwaye namhlanje bayawa 54 epreli. Lo mdlali, owazalelwa kiwi eWellington, eNew Zealand, kwaye wakhulisa i-koala yase-Australia (ngoku uye waba mkhulu kakhulu), wenze yonke into kwi-cinema, eyona nto ibhetele kunye neyona nto, kwaye kunjalo, unabalinganiswa abambalwa boncwadi kwikhredithi yakhe. Ke namhlanje linqaku lomntu apho ukuthanda kwam kokubini, uncwadi kunye nomdlalo bhanyabhanya, kungqinelana nencopho yabo.
Nangona kukho ezinye izinto ezingaphaya kwikhondo lomsebenzi wakhe, aba bathathu babalinganiswa boncwadi zezona zichaphazelekayo. Umhlophe uBud (eyamnika impumelelo yakhe yokuqala yamanye amazwe kunye nokwamkelwa), UJack Aubrey y Javert, zenziwe ngababhali abathathu abahlukileyo omnye komnye. Ndiyawajonga kwakhona ukubhiyozela loo minyaka engama-54. Ukuba iphindwe kabini, iqabane, kwaye ndiyababona. IKoala okanye nantoni na eyenzekayo.
1 URussell Crowe
2 UBud White - Imfihlo ye-LA (1997)
3 UJack Aubrey-Master kunye noMlawuli (2003)
4 UJavert-Les Miserable (2012)
Kunye neCrowe akukho mhlaba uphakathi. Ziphantse 20 iminyaka emva kobomi bakhe kunye nemimangaliso kwaye ndidibene nazo ZONKE iintlobo zabalandeli abanyanisekileyo okanye abagxeki abanomsindo bomsebenzi wakhe okanye umntu wakhe. ndine ii-anecdotes kuyo yonke indawo kwaye ndilwe amadabi okwenyani apho lichitheke lonke igazi elinokuthelekelelwa. Nabani na olaziyo ilizwe labalandeli uyazi kakuhle.
Kodwa ngaphandle kothando kunye nokuthiya kwalo mdlali kuyo nayiphi na imbonakalo yakhe, ukuba kukho into ebonisa umsebenzi wakhe kwifilimu, yeyakhe ukukwazi ukunyamalala kubalinganiswa odlalayo. Kananjalo ngaphandle kokukhetha umntu okanye enye yeefilimu zakhe ezingaphezulu kwama-30 okanye umgangatho wazo omkhulu okanye omncinci okanye impumelelo ephumeleleyo, loo mandla agcinwa kuwo onke. Ukuba naye uhamba kunye notshintsho ngokwasemzimbeni amatyeli aliqela, umane ubona umlinganiswa.
Inqaku kukuba, ngubani esinaye phambi ko ngaphezu kwesihlandlo esinye kule ndoda, simnikile isandla sakhe saza sathetha ilizwi naye, singangqina ukuba obu buchule bungu uqikelelo lwangaphandle lwamandla angaphakathi iphantse yabonakala. Amandla agcwalisa kwaye awele isikrini kwaye awadingi magama ukubonisa nayiphi na imvakalelo. Njengomntu kunye nomlinganiswa. Kwaye igalari yabalinganiswa inde kakhulu, kodwa ngoku sihamba nalawa ma-3 anyanisekileyo.
U-Bud White - Imfihlo ye-LA (1997)
Ndingadinga i- izinto ezilishumi elinambini ukubanakho ukuchaza, ukuxela okanye ukuveza oko kuthethwa ngulo mlinganiswa kwifilimu yam, kuncwadi nakubomi bam bobuqu, Ke kuzakufuneka ndibambelele kwikhonkrithi. Kuluhlu lwam olude lwabalinganiswa abakwazileyo ukugcwalisa umphefumlo wam ngokungxama ngeemvakalelo, uMmeli (kamva uSergeant) uWendell "Bud" White ngu eyokuqala ngokude Kwaye ngokunye nomlingane wakhe wase Nordic wangoku.
Yenziwe ngu UJames ellroy, UMhlophe lelinye lamalungu oBathathu Emnye ongcwele wamapolisa adlala indima kwinoveli ethi Inja eMad yazala ngo-1990. ulungelelwaniso olunomtsalane Isayinwe ngu-Curtis Hanson kwiminyaka esixhenxe kamva. Yiyo eyandikhokelela kwinoveli. Ukusuka apho ukuqwenga yonke i-Ellroy kwaye wamkele kube kanye kwaye yonke loo nto ii-antiheroes kunye nabalinganiswa boncwadi abangamadoda, bumnyama, bayathuthunjiswa kwaye njengasendle njengabantu ngokunzulu bubuthathaka bam.
Ukuthanda kwam into kangangokuba ndandide ndibhale elam ibali njengokuqhubeka kwintsalela yeemvakalelo ifilimu kunye nenoveli endishiyileyo. Kwaye andithandabuzi ekuqwalaseleni uBud njenge owona msebenzi ungcono Umsebenzi weCrowe.
UJack Aubrey - Umlawuli kunye nomphathi (2003)
Unokuthetha okufanayo nakuCaptain Jack Aubrey. Kuba xa ndafumanisa ukuba uCrowe uza kuyidlala, nam ndaya ngqo ukufumana yonke Uthotho lwenoveli yolwandle ibhalwe ngu UPatrick O'Brian. Ngothando ukususela ebuntwaneni kuhlobo lwe Iihambo ngakumbi abo badlulayo elwandle nakwiinqanawa, Bendibasalindile kwaye ukufota umboniso bhanyabhanya yayisisizathu esifanelekileyo. Ndizifunde zilandelelana.
Ukusuka kwiphepha langaphambili lolo rhatya lomculo eMahon xa uAubrey noStephen Maturin badibana, bendisazi ukuba uCrowe uza kuyenza kwakhona. Ngokwendalo ndigqibile ukufunda uthotho emva kwexesha elide ndibukele imovie. Kwaye kunjalo. Inkqubo ye- ingxolo, umthandi womculo, onesibindi, ogqithisileyo, ongakhathaliyo kodwa ophantse abe msulwa I-Royal Navy Captain uJack Aubrey ingabonakaliswa kuphela kumntu onjengeCrowe.
Kodwa bekukho kwilizwe lakowabo UPeter weir ukwalathisa umsebenzi. Kwaye nabani na owaziyo i-cinema yalo mlawuli ubalaseleyo uyazi malunga naye incasa olugqibeleleyo kunye nokwenza ngcono ekwenzeni imifanekiso. Ukuba ukongeza abadlali beBritane bonke abazelwe kwindima abayidlalayo, Iziphumo zibalasele. Ewe, ukufunda iinoveli kufuneka uyithande uhlobo olo. Ukuba akunjalo, banokuba nobuchwephesha ngenxa yolwimi lwabo.
Ukutshintsha - Iimbandezelo (2012)
Ukulungelelaniswa kwefilimu umculo wasentsomini yenziwe ngumFrentshi UClaude-Michel Schönberg kunye UAllen boublil wayenethamsanqa elincinci. Ngokusekwe kwenye yeklasikhi yeklasikhi soncwadi kungekuphela kwe-gala kodwa kwihlabathi liphela lisayinwe UVictor Hugo, umculo kunokwenzeka eyona ikhumbulekayo Zingaphi ezenziweyo. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo eyona mpu melelo, kakhulu kangangokuba mhlawumbi yaziwa ngcono kwaye ikhethwayo kunenoveli uqobo.
Así parece Inkampani eyingozi kakhulu isondela kwimifanekiso ukuya kumgangatho omangalisayo wokumisela kunye nesandi esiphilayo somculo ongasoze ulibaleke kunye namazwi. Kwaye ngaphandle luluhlu olungapheliyo lweemvumi eziguqukileyo zaza zanika amazwi angaqhelekanga kubalinganiswa abanjengo UJean Valjean, Javert, Fantine, Eponine okanye uCosette.
Umlawuli waseBritane UTom hooper Wayenobuganga kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye wayefuna, ubuncinci, ukubakho okunyanzelekileyo kunye namazwi avumayo ubuncinci. Isiqingatha siyifumene kwezona zinto zibonakalayo, kodwa ishiyeke ngasemva kumbuzo womculo. Abadlali bafuna ukudibana UHugh Jackman okanye uSamantha Banks, Ngamava omculo oqeqeshiweyo. Okanye enye Anne Hathaway ngubani othathe u-Oscar ukuba ngumdlali weqonga ongcono kakhulu weFantine emnandi kunye nesidima UEddie Redmayne njengoMarius.
Kwaye uRussell wam othandekayo kwafuneka ukuba abeke isaber kunye neyunifomu ukunika ukupakisha kunye nomlinganiswa ziyimfuneko kwaye zanele kuloo nto IJavert emnyama kwaye ethe kratya. Kwanele ukubonelela ilizwi lakhe eliqingqiweyo, esebenza kwezinye iintlobo zobuntu bakhe ngakumbi kunasemculweni oneempawu ezibalaseleyo njenge Iimbandezelo. Kodwa, kwakhona, ngubani ongazange amfanyekiswe luthando, akunjalo? Kulungile.
Ukwazi ngakumbi: URussell Crowe. Kwi-technicolor, mhlekazi ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » URussell Crowe. Abalinganiswa bayo abathathu ababaluleke kakhulu kuncwadi.
Ndabelana ndide ndiye kwikoma yokugqibela, yolu phononongo loncwadi oluhle olwenzileyo ndisebenzisa ithuba lokuzalwa kwalo mdlali ubalaseleyo. Ngumnyhadala wethu sonke esizithandayo ezi bhanyabhanya ukuba siye kowona mthombo uphambili. Kuya kufuneka ndivume ukuba ndiyonqena xa kufikwa ekufundeni incwadi, kodwa abo bebekade belayibrari yam ixesha elide. Ndiyabulela uMariola ngolu hambo lumnandi kum, kuba ndikhangele phambili ekusonwabiseni kwakhona ngentsebenzo entsha ephambili, ekunokwenzeka ukuba ivela kwenye inoveli enkulu.
Inqaku elimnandi, uMariola.
Ngokuqinisekileyo kum, kunye nokusebenza kukaCrowe kwi-LA Confidencial yenye yezona zinto zibalaseleyo, ukuba ayingoyena ulungileyo, wobomi bakhe, ubuncinci eHollywood. Kungenxa yokuba ndikhe ndayibona eminye yemidlalo yakhe yobutsha e-Australia kwaye, e-Romper Stomper okanye ku-We Two naye wenza imidlalo emihle eza kususa umnqwazi wakhe… njengazo zonke azenzayo.
Ndiyabulela kakhulu ngezimvo zakho. Uyazi ukuba siyavumelana ngokupheleleyo kule NQAKU. Ihagi.
uhlala kuyo yonke
Iincwadi zikaLaura Gallego: ubumnandi kunye nolutsha